Iligi yebhola ekhatywayo iyaqala. Masifunde malunga nayo, akunjalo? | Uncwadi lwangoku
Iligi yebhola ekhatywayo iyaqala. Masifunde malunga nayo, akunjalo?
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli emnyama
Iligi yebhola ekhatywayo iqala kwakhona. Kwakhona ixesha eligcwele inkanuko, uloyiso, ukoyiswa, iingxaki, ii-pichichis, iinjongo kunye neenjongo, ubuntshatsheli kunye nezinye iikhonsepthi zomhlaba wonke womdlalo omhle. Abalandeli okanye hayi, wonke umntu uyayiqonda ibhola ngexesha elithile kwaye, ewe, iqela lethu lelona lifanelekileyo. Kodwa, ngaphaya kwemihla yeCawa kunye namanqaku iwaka esiza kulifunda, zikhona neencwadi kubhalwe ngaye. Ukuba zininzi kwaye zininzi. Ezi zilungile Ezi-6 zazo. Bonke abaphulaphuli.
1 ILos futbolísimos - Imfihlakalo yoosompempe abaleleyo - URoberto Santiago
2 Iqela lephupha - uMario Torrecillas kunye noArtur Laperia
3 UThixo ujikeleze - uJuan Villoro
4 Umkhuhlane kwii-bleachers-uNick Hornby
5 Ingxolo yangasemva-UDavid Gistau
6 Imarike yasebusika-uPhilip Kerr
Yona ibhola - Imfihlakalo yoosompempe abalele - URoberto Santiago
El isihloko sokuqala kolu ngcelele, yenye yezona zinto ziphumelele kubafundi abancinci phakathi Iminyaka ye-10 kunye ne-12. Umzekeliso ngu-Enrique Lorenzo Díaz.
Francisco dlala kwiqela lebhola ekhatywayo ISoto Alto, ohamba kwizikhundla zokugqibela zeligi. Kusele kuphela imidlalo emi-3 kwaye kufuneka baphumelele omnye kuba ukuba akunjalo, baya kuthotywa kwaye iqela liya kuthi shwaka. Kodwa xa bephumelela kumdlalo wokuqala, ngequbuliso Usompempe uyalala aze angene umntu obambeleyo lonto ibenza balahlekelwe. Kwenzeka into efanayo kumdlalo wesibini, nangona ngeli xesha bebambene. Okokugqibela, kumdlalo wesithathu, kuya kufunyanwa ukuba ngubani ongasemva kwala maphupha angummangaliso.
Yiphuphe -UMario Torrecillas kunye noArtur Laperia
Esinye isihloko somncinci, ngeli xesha a udidi. Yibhale UMario Torrecillas umfanekiso wokubamba indawo kwaye uyibonisa UArtur Laperla.
U-Enzo yinkwenkwe yobumelwane enomdla webhola. Abazali bakhe bahlukene kwaye nangona umama wakhe ekwazile ukwakha ubomi bakhe kwakhona, utata wakhe uyintlekele. Sela, bubundlobongela ... Kodwa u-Enzo unebhola ekhuselekileyo yokubaleka kwaye nayo ilungile, kangangokuba ngenye imini a I-Arsenal scout kwaye uyamqaphela. Ngaba uza kuyisayina?
UThixo ungqukuva -UJuan Villoro
Lo mbhali waseMexico ubhala a Imbali enkulu yenkolo yelizwe ethi ibhola ngamawaka abalandeli abazalisa amabala emidlalo. Ibiyi Umthunywa okhethekileyo kwiNdebe yeHlabathi e-Itali 90 naseFrance 98 kwaye ulawula zombini isitayile sokubhala ezinyaweni zentsimi kunye neethoni ebonakalayo. Esi sihloko sisisipho kothixo owaziwayo webhola, MaradonaUkwathetha ngobuqaqawuli nokugqithileyo kwiligi yaseSpain okanye uchaza ukuba yayiyintoni na iNdebe yeHlabathi yokugqibela ye-XNUMXth century.
Umkhuhlane kwizitendi -Nick Hornby
Iqwalaselwe njengeyona ncwadi ibalaseleyo yebhola ekhatywayo eyakha yabhalwa, wabeka uHornby phakathi kwababhali abaphambili abangamaNgesi besizukulwana sakhe. Ngexesha elingaphezulu, ngaphezulu, sele yenziwe unqulo bobabini abalandeli bebhola kunye nomfundi ngokubanzi. Ithengise ngaphezulu kwekopi ezizigidi e-UK kwaye ineefilimu ezimbini. KwiHornby, ibhola ekhatywayo ithetha indlela yonke yokubona kunye nokuba sehlabathini. Kwaye le ncwadi yingxelo yobomi bakhe obunobundlobongela kunye neqela lakhe, i indlu yezixhobo zemfazwe yaseLondon.
Ingxolo yangasemva -UDavid Gistau
Inoveli yetyala yile ntatheli kwaye ibhaliwer, fan enkulu yezemidlalo. Ubalisa ibali lika UEduardo Barcena, intatheli ephumeleleyo kakhulu ebonakala ngathi inako konke: eyona ntombazana ibalaseleyo, owona msebenzi mhle, kunye nezibonelelo ezininzi. Kodwa inyani inxulumene Umzantsi we-Ultra, awayehlala kuyo kwiminyaka eyadlulayo, uya kumbuyisela kwimbali yakhe emnyama awayehlala ezama ukuyifihla.
Imarike yasebusika -Philip Kerr
UKerr, ngelishwa usweleke kunyaka ophelileyo, wapaka isidalwa sakhe esidumileyo, umcuphi waseJamani uBernie Gunther, kwesi sihloko kunye nesinye, Bubuxoki isithoba, uzinikele kwihlabathi lebhola. Kodwa uqhubeke nokushiya isitampu sakhe esimnandi.
Umlinganiswa ophambili ngu UScott Manson, umphathi wesekela lesiXeko saseLondon, iqela leligi lesiNgesi. Unesisa, abadlali bakhe bayamthanda, kodwa ke njalo noonondaba kunye nebhodi, kwaye uyazi yonke into yokuphuma komdlalo, ngaphandle nangaphandle kwebala. Kodwa ngenye imini Umlawuli wezobuchwephesha weqela ubonakala ebulewe kwibala lemidlalo. Kwaye yonke into ibonisa ukuba inxulunyaniswe nemali enkulu, imfuno yokhuphiswano lwezemidlalo oluphezulu kunye nezinye izinto ezilusizi ngakumbi. UMason uza kuzama ukufumanisa umbulali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iligi yebhola ekhatywayo iyaqala. Masifunde malunga nayo, akunjalo?
Iincwadi: Umdlalo weTrone
Umthi wolwazi, nguPío Baroja. Uhlalutyo olufutshane.